iPhone 13 iyo iPhone 13 Mini, waxaan kuu sheegaynaa dhammaan faahfaahinta | Wararka IPhone
Miguel Hernández | 16/09/2021 00:51 | La cusbooneysiiyay 23/09/2021 09:57 | iPhone 13, Noticias, Terminalka IPhone
Apple ayaa ku soo noqotay sharadka taxane soo -saarisyo ah oo aan si faahfaahsan ugu falanqaynay halkan Actualidad iPhone, sida Taxanaha Apple Watch 7, una iPad -ka cusub ama xitaa iPhone 13 Pro, marka hadda waa inaan ka hadalnaa meesha ugu dhaqsaha badan uguna caadiga ah ee shirkadda.
IPhone 13 iyo iPhone 13 Mini waxay heleen dayactir xiiso leh, in kasta oo bannaanka aysan u muuqan inay wax badan iska beddeleen, waxay qarisaa wax cusub oo cusub. Nala soo socodsii dhammaan faahfaahinta iPhone 13 si aad si qoto dheer ugu ogaato noocyada kala duwan ee badeecadaha ee shirkadda Cupertino.
1 Dhimista darajada iyo dayactirka shaashadda
2 Awood badan iyo bakhaarro cusub
3 Kaamirooyinka waa jilayaasha
4 Faahfaahinta inteeda kale waa ficil ahaan
5 Shirkadee ayaad ku iibsan kartaa iPhone 13?
Dhimista darajada iyo dayactirka shaashadda
Aaladda cusub ee Apple waxay ku dhowdahay inay dhaxasho naqshadda walaalkeed iPhone 12, sidaa darteed waxay ilaalisaa 6,1 inches. Si tan loo sameeyo, ku dheji guddi xagga hore OLED Super Retina XDR leh iswaafajin loogu talagalay Dolby Vision ee saamiga 19,5: 9, intaas oo dhan waxaan gaarnay qaraar 2532 x 1170 oo markaa cufnaanta 460 pixels halkii inji. Mar kale Apple sharad ku a 60 Hz heerka cusbooneysiinta, oo arrintu waxay tahay in wax badan laga sheego 120 Hz oo ah in looxyada Apple ay kor u kici doonaan, laakiin tan waxaa loo hayaa nooca "Pro" ee iPhone. Marka laga hadlayo iPhone 13 Mini waxaan leenahay guddi 5,4-inji ah, oo leh qaraar 2340 x 1080 ah oo bixiya 476 pixels halkii inji ee cufnaanta.
IPhone 13 Cabirka: 146,7 x 71,5 x 7,6 mm
IPhone 13 Miisaanka: Gram 173
IPhone 13 Cabbirrada yaryar: 131,5 x 64,2 x 7,6 milimitir
IPhone 13 Miisaanka Yar: 140 garaam
Faahfaahin kale oo qaybtan hore ah ayaa ah in '' notch '', marka lagu daro isku -darka nooca 2.0 ee Aqoonsiga Wajiga, hadda wuxuu leeyahay ballaadh ay hoos u dhacday 20%, si kastaba ha ahaatee, waxay ahaanaysaa dherer isku mid ah, sidaa darteed aagga shaashadda la adeegsan karo wuxuu ku dhow yahay isla sidii daabacaaddii hore ee iPhone. Dhab ahaantii Apple waxay dooratay inay yareyso nocht -kan, kaasoo u wareejiyay af -hayeenka meesha ugu sarreysa ee shaashadda, wax ay shirkado kale oo taleefanno ah samaynayaan in muddo ah, iyadoo aan la ogeyn haddii tayada maqalka lagu hayo dhinacan .
Heer farsamo, Apple lama wadaagin wax macluumaad ah oo ku saabsan RAM, sidii caadada u ahayd, markaa waxaan sugi doonaa saxaabada iFixit samee baaritaanadaada hore, in kasta oo loo malaynayo inay lahaan doonto 6 GB oo RAM ah, oo 2 GB ka yar tahay nooca "Pro" ee iPhone. Xagga farsamaynta, processor -ka A13 Bionic oo ay soo saartay TSMC iyo in Apple ay u aqoonsatay inuu yahay processor -ka ugu awoodda badan GPU -ga isku -dhafan ee taleefannada gacanta ee suuqa soo baxa, su'aal ay adag tahay inaan ka wada hadalno.
Awood badan iyo bakhaarro cusub
Xaaladdan oo kale, Apple ayaa doortay NPU Neural Engine jiilka afaraad oo gacan ka geysan doona ka shaqaynta sawir qaadista iyo waxqabadkii xaqiiqada la kordhiyay iyo ciyaaraha fiidiyaha. Dabcan, mid ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badan ayaa ku jira kaydinta, oo loogu talagalay iPhone 13 noocaan ah Apple waxay dooratay inay ka bilowdo 128GB, labanlaabmay 64 GB oo lagu bixiyay iPhone 12 iyo bixinta laba ikhtiyaar oo dheeri ah oo dhex mara 256 GB iyo 512 GB, waa cusub oo dadka isticmaala macruufka shaki la'aan ay u sacbinayaan.
Qeybta farsamada ee heerka isku xirnaanta, Apple waxay sidoo kale dooneysay inay la socoto casriyeynta, tan ayay u adeegsatay WiFi 6E qalabkan, oo hadda dhaca inuu haysto 5G baaxad weyn oo run ah dhammaan noocyada iPhone oo maxaa haya NFC Dabcan, hadda waan haysan karnaa DualSIM iyada oo loo marayo eSIM illaa 5G labada kaararka dalwaddu, taas oo noqon karta talaabadii ugu horaysay ee loo qaaday qalab aan lahayn dekedo. Sida iska cad, booska kaarka nanoSIM waa loo hayaa, kuwa aan fursad u helin inay ka helaan eSIM shirkaddooda taleefan.
Kaamirooyinka waa jilayaasha
Heerka kamaraddu waxay timaaddaa dib -u -habayn kale oo weyn, modulkii dambe wuxuu hadda haystaa meel aad u badan wuxuuna beddelay habaynta dareemayaasha, kaas oo aadaya naqshad dadweyne, oo beddelaya tii hore ee toosan, iyo iyada oo aan la dhexgelin dareeraha LiDAR ee mar labaad la sii hayo ee kala duwan «Pro». Kaameeraha ugu weyn oo ah Xagasha Wide waxay leedahay 12 MP oo leh f / 1.6 aperture f / XNUMX iyo nidaam xasilinta muuqaalka muuqaalka sare (OIS). Dareenka labaad waa a 12 MP Ultra Wide Angle oo kiiskan awood u leh qabashada 20% iftiin dheeraad ah marka loo eego nooca hore ee kamaradda iyo inay leedahay dalool f / 2.4. Waxaas oo dhami waxay noo oggolaan doonaan inaan ku duubno 4K Dolby Vision, Full HD illaa 240 FPS oo xitaa aan ka faa'iideysanno habka "shineemada" oo ku daraya saamayn mugdi ah xagga softiweerka, laakiin waxay diiwaangelisaa kaliya 30 FPS.
Sida kamaradda hore, Apple waxay sii wadaysaa inay ka faa'iidaysato nidaamka Qoto Dheer ee runta ah oo ka kooban 12 MP sensor-xagal ballaadhan, oo leh f / 2.2 aperture, a 3D ToF sensor iyo LiDAR, taas oo u oggolaanaysa duubista dhaqdhaqaaq qunyar leh.
Faahfaahinta inteeda kale waa ficil ahaan
Ka hadalka madaxbannaanida iPhone 13 -ka cusub wuxuu leeyahay 20W ku dallacitaan degdeg ah iyo bilaa wireless iyada oo loo marayo 15W MagSafe. Dhanka iska caabinta, waxay mar kale sharad ku galeen heerka IP68 iyo gaashaanka Dhoobada ee muraayadda hore, kaas oo ballanqaadaya inuu noqdo kan ugu xooggan suuqa. Sidaad si fiican u ogtahay, iPhone -ka waa la keydin karaa laga bilaabo Jimcaha 17 -ka Sebtember oo cutubyada ugu horreeya waxaa la soo diri doonaa laga bilaabo Sebtember 24. Waxaad ku iibsan kartaa midabada casaan, caddaan, madow, buluug iyo casaan, oo lagu dhisay aluminium dib loo warshadeeyay oo loogu talagalay shassis iyo galaas xagga dambe oo ah qaab dhalaalaya, oo keydka u dhiganaya “Pro” sida dhacda waqtiyo kale.
Kuwani waxay noqon doonaan qiimayaasha:
Sidaad arki karto, qiimayaasha waa la joogteeyaa marka la barbar dhigo sanadkii hore, wax ay tahay in la tixgeliyo sababtoo ah yaraanta semiconductors -ka iyo kororka kharashka wax -soo -saarka. Dhawaan ayaan idiin soo gudbin doonaa falanqaynteena qotada dheer, la soco.
Shirkadee ayaad ku iibsan kartaa iPhone 13?
Qaar ka mid ah hawl -wadeennada aad wax ku iibsan karto, hadda, iPhone 13 waa Movistar, Vodafone, Orange iyo Yoigo. Si aad u hesho taleefanka casriga ah, waxaad u baahan tahay inaad macmiil u noqoto hawlwadeenka oo aad shaqaalaysiiso mid ka mid ah qiimayaashooda, ha ahaato mid isku xidhan ama mid guur -guura.
Qiimaha iPhone 13 wuu kala duwanaan doonaa iyadoo ku xiran nooca aad dooratay iyo shirkadda taleefanka, sida lagu tilmaamay Wareega. Tusaale ahaan, en Vodafone waxay leedahay ikhtiyaarka ugu jaban suuqa 128GB iPhone mini loogu talagalay 702 810. Dhankooda, Movistar iyo Orange waxay bixiyaan qaab isku mid ah qiyaas ahaan qiyaastii XNUMX XNUMX. Ku saabsan iPhone 13, Vodafone sidoo kale waa kan bixiya bedelka ugu jaban. Qiimaha iPhone 13 oo leh 256GB ee hawlwadeenka Ingiriiska ayaa ah 909 XNUMX.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » iPhone 13 iyo iPhone 13 Mini, waxaan kuu sheegnaa dhammaan faahfaahinta